Ubunlog एक समाचार प्रसारण गर्न र मुख्य समाचार, ट्यूटोरियलहरू, युक्तिहरूको बारेमा जानकारी गराउन समर्पित छ र सफ्टवेयर जुन हामी उबन्टु वितरणसँग प्रयोग गर्न सक्दछौं, यसको कुनै पनि स्वादहरूमा, जुन यसको डेस्कटपहरू र वितरण जुन उबन्टुबाट लिनेक्स मिन्ट जस्ताबाट आएको हो।
लिनक्स विश्व र नि: शुल्क सफ्टवेयरको लागि हाम्रो प्रतिबद्धताको एक भागको रूपमा, Ubunlog को एक साझेदार रहेको छ ओपनएक्सपो (२०१ 2017 र २०१)) र Freewith २०१ 2018 स्पेनमा क्षेत्रको दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू।
Ubunlog को सम्पादकीय टीम को एक समूह बाट बनेको छ उबुन्टु, लिनक्स, नेटवर्क र नि: शुल्क सफ्टवेयरका विज्ञहरू। यदि तपाईं पनि टीमको भाग हुन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ सम्पादक बन्न हामीलाई यो फारम पठाउनुहोस्.
नयाँ टेक्नोलोजीहरू, गेमर र लिनक्सिरोको बारेमा उत्साहित जहाँ उहाँ समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ। २०० since देखि उबन्टु प्रयोगकर्ता (कर्मिक कोआला), यो पहिलो लिनक्स वितरण हो जुन मैले भेटें र जससँग मैले खुला स्रोतको विश्वमा अद्भुत यात्रा गरें। उबुन्टुको साथ मैले धेरै कुरा सिकेकी छु र सफ्टवेयर विकासको विश्वमा मेरो उत्कट छनौट गर्ने यो एउटा आधार हो।
व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि प्रकारको टेक्नोलोजी र सबै प्रकारका अपरेटि systems प्रणालीहरूको प्रेमी। धेरै जत्तिकै, मैले विन्डोजबाट सुरू गरें, तर मैले यो कहिल्यै पटक्कै मनपराएन। मैले पहिलो चोटि उबन्टु २०० 2006 मा प्रयोग गरें र त्यसबेलादेखि मसँग कनिनिकल अपरेटि system प्रणालीमा कम्तिमा पनि एउटा कम्प्यूटर चलिरहेको छ। मलाई रमाईलो याद छ जब मैले १०.१ इन्च ल्यापटपमा उबन्टु नेटबुक एडिन्सन स्थापना गरें र रब्बेरी पाईमा उबन्टु म्याट पनि रमाउँदछु, जहाँ मन्जारो एआरएम जस्ता अन्य प्रणालीहरू पनि प्रयोग गर्छु। हाल, मेरो मुख्य कम्प्युटरमा कुबन्टु स्थापना गरिएको छ, जुन मेरो विचारमा, केडीईको सबै भन्दा राम्रोसँग उबन्टु बेसलाई उही अपरेटि system प्रणालीमा सबै भन्दा राम्रोसँग जोड्दछ।
प्रोग्रामिंग र सफ्टवेयरको रुचि। मैले २००bu (वार्टी वारथोग) मा उबन्टुको परीक्षण गर्न सुरु गरें, यसलाई कम्प्युटरमा स्थापना गरें जुन मैले काठको आधारमा राखें र काठको आधारमा राखें। त्यस बेलादेखि र प्रोग्रामिंग विद्यार्थीको रूपमा मेरो समयमा विभिन्न Gnu / Linux वितरण (फेडोरा, डेबियन र सुसे) को प्रयास पछि, म दैनिक प्रयोगका लागि उबन्टुसँग बसेँ, विशेष गरी यसको सरलताको लागि। फिचर जुन म सँधै हाइलाइट गर्छु जब कसैले मलाई प्रश्न गर्दछ Gnu / लिनक्स संसारमा सुरू गर्न कुन वितरण प्रयोग गर्ने? जे होस् यो केवल एक व्यक्तिगत विचार हो ...
म टेक्नोलोजीको बारेमा उत्साहित छु र मलाई कम्प्युटर अपरेटिंग प्रणाली र आर्किटेक्चरको बारेमा ज्ञान सिक्न र साझेदारी गर्न मन पर्छ। मैले डेस्कटप वातावरणको रूपमा केडीई संग सुस लिनक्स .9.1 .१ को साथ शुरू गरें। त्यसबेलादेखि म यो अपरेटि system प्रणालीको बारेमा उत्साहित छु, मलाई यस प्लेटफर्मको बारेमा सिक्न र अधिक जानकारी लिनको लागि नेतृत्व गर्दै। त्यस पछि म यस अपरेटि system प्रणालीमा गहिराइ मन पराउँदै छु, जुन कम्प्युटर आर्किटेक्चर मुद्दाहरू र ह्याकिंगको साथ संयोजन गर्दै। यसले मलाई एलपीआईसी प्रमाणपत्रका लागि मेरा विद्यार्थीहरूलाई तयार पार्न केहि पाठ्यक्रमहरू पनि सिर्जना गरेको छ।
इतिहासकार र कम्प्युटर वैज्ञानिक। मेरो हालको लक्ष्य भनेको यी दुई संसारहरू जुन म बाँचिरहेको छु त्यसबाट मेलमिलाप गर्नु हो। म GNU / Linux विश्व, र खास गरी उबुन्टुको साथ प्रेम गर्छु। म यो महान अपरेटिंग प्रणालीमा आधारित विभिन्न वितरण परीक्षण गर्न मनपराउँदछ, त्यसैले म तपाईंसँग कुनै प्रश्न गर्न खुला छु।
नि: शुल्क र खुला स्रोत सफ्टवेयर उत्साही, जहिले चरमको स्पर्श नगरी। मैले त्यस्तो कम्प्युटर चलाएको छैन जुनको अपरेटि system सिस्टम लिनक्स होइन र जसको डेस्कटप वातावरण केडीई केहि बर्षदेखि छैन, यद्यपि म बिभिन्न विकल्पहरूमा मेरो आँखा राख्छु। तपाईं मलाई fco.ubunlog (at) gmail.com मा ईमेल पठाएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ
ब्यालेरिक द्वीप विश्वविद्यालयको कम्प्युटर इञ्जिनियरि student विद्यार्थी, सामान्यतया नि: शुल्क सफ्टवेयरको प्रेमी र विशेष गरी उबुन्टु। म यस अपरेटि system प्रणालीलाई लामो समयदेखि प्रयोग गर्दैछु, यति धेरै कि म यसलाई मेरो दिनको दिन प्रयोग गर्ने गर्दछु अध्ययन गर्न र रमाईलोको क्षणहरू।
कम्प्युटर इञ्जिनियर, म लिनक्स, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क र सबै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूसँग गर्न सक्ने फ्यान हुँ। लिनक्स प्रयोगकर्ता १ 1997 XNUMX since देखि। ओह, र कुल बिरामी उबुन्टु (निको हुन चाहँदैन), जसले तपाईंलाई यस अपरेटिंग प्रणालीको बारेमा सबै कुरा सिकाउने आशा राख्दछ।